Lo mhlangano ubugxile ekutheni izikhungo zoqeqesho ezahlukahlukene zingabambisana kanjani kulolu daba lokunyusa izinga lebhola kubadlali abasebusheni babo. UDladla ubehlalisene nezihlabani zebhola uMnz Sugar Ray Xulu kanye noMnz Clive Barker abebemele abadlali nabaphathi babo. Usihlalo kube nguMnz Lindelani Mbense wezemidlalo kuSABC.
UDladla usezakhele igama njengomqeqeshi wamaqembu amaningi eSouth African Youth National Under-20 kanye no-Under 23, waphinda waba yisekela lomqeqeshi kwi-Under-20 Soccer World Cup ngonyaka ka2007 kanye nango-2000 kuma-Olimpiki. Ngo2009 uDladla waqala i-Izichwe (Warriors of Shaka) eMgungundlovu emuva kokubeka phansi izintabo ekuqeqesheni amaqembu ompetha entsha. Kuloluhlelo abadlali abasebasha baqeqeshelwa ukuba ngopmetha nokuhola ngokuvelele kwezemfundo, ubunyoningco kanye nokuzikhulisa kwezemidlalo. Loluhlelo lubanjelwa ePeter Booysen Training Centre eMgungundlovu lapho kuqeqeshwa abadlali abangamashumi amane abasukela eminyakeni engu12 kuya kwengu14. Baqeqeshwa nguDladla kanye nabanye abaqeqeshi abahlanu ababhaliswe kwi South African Football Association (SAFA). Abadlali baphinde baqeqeshwe yizifundiswa ezisaqhuba izifundo zobuchwepheshe esikhungwini saseNyuvesi esiseMgungundlovu. Baphinde babe neqembu leizibalo ngaphezu kwalokho. Impela ngabadlali bekhethelo laba.
UDladla ugcizelele ukubaluleka kokuqeqesha intsha isencane. ‘Izikhungo zokuqeqesha zidinga ochwepheshe kwezokudlala, kwezobudokotela kanye nabaqeqeshi nabaphathi abathembekile.’ Evumelana noDladla, uXulu uthe kumele kube lula ukudlala kubadlali asebethanda ukuqina. UBarker uthe kubalulekile nokuthi abadlali abasebasha bachithe isikhathi nemindeni yabo kuze bathole inkuliso.
Umqeqeshi uMnz Neil Tovey ukhulume ngokubaluleka kwezemidlalo, kahulukazi ibhola ezikoleni. ‘Uma abadlali bekhula beqhudelana ezikoleni lokhu kunciphisa amathuba okuthi bazithole kuncipha amathuba ekusasa eliqhakazile,’ kusho uTovey. ‘Abaqeqeshi asebethathe umhlalaphansi nabo silindele ukuthi bazimisele ukuqeqesha njengoDlala.’
Amalunga ezihambeli zalomhlangano abuze ukuthi uhulumeni angasiza kanjani ukwenza lamaphupho afezeke. Athe kumele uhulumeni abambisane namaqembu amakhulu nabaqeqeshi bebhola. Baphakamise imibono efana nokwethembeka, izinsizakuqeqesha kanye nempatho enhle yabasebenzi njengezaba ezizosiza lesi simo.
Umhlangano lo obuhanjelwe namalunga ahulumeni, abanandisi kunye nosaziwayo bebhola abathokozele umculo othulwe izifundiswa zeSchool of Music eNyuvezi.